Idiksi eyomileyo -I-Goodao Technology Co, Ltd.
Idada elomileyo uJerky yenye yezona zinto zithengiswayo zokuthengisa inja ngokusekwe kwinyama yedada. Sikhetha inyama yebhokhwe yedada ekumgangatho ophezulu njengezinto zomqolo, emva koko sisebenzise ngaphakathi kwimveliso yokomisa evalelwe ngokupheleleyo. Ubume benyama bubonakala ngokucacileyo kwaye inyama inencasa yencasa emnandi, ivumba elinamandla kwaye ikulungele ukonwabela xa ivuliwe. Inomlomo ohlafunwayo ukunceda iintsana zigaye amazinyo.
Ubunzima benja (kg)
Inani lokondla (isilayi / usuku)
Ingqwalaselo: Le mveliso yenziwe ngenyama entsha egcadiweyo enomxholo omncinci wokufuma, kuyacetyiswa ukuba usike iziqwenga ezincinci xa usondla izinja ezincinci.
Iprotein yeCrube: 50% min
I-Crube Fat: 2.5% ubuninzi
I-Crube Fibre: 1% ubuninzi
Uthuthu: 3.5% ubuninzi
Ukufuma: 18% max
Igama leemveliso Idada elomileyo uJerky
Ifanelekile Zonke iintlobo zezinja ezingaphezulu kweenyanga ezintathu ubudala
Imveliso ephambili Idada
Siye abanamava umenzi. Ukutyisa uninzi lwezatifikethi zakho ezibalulekileyo zentengiso yazo kuMgangatho oLungileyo waseChina uPetideal Rawhide Chips kunye noMthengisi weZinkukhu zeNyama yeNkukhu, Ukuphuculwa okungapheliyo kunye nokuzabalazela ukusilela kwe-0% yimigaqo-nkqubo yethu emibini esemgangathweni. Ukuba ufuna nantoni na, ungathandabuzi ukunxibelelana nathi.
Umgangatho olungileyo wokutya kweenja zaseTshayina kunye neZibonelelo zeZilwanyana amaxabiso eNja, Bonke abasebenzi bethu bakholelwa ukuba: Umgangatho uyakhiwa namhlanje kwaye inkonzo idala ikamva. Siyazi ukuba umgangatho olungileyo kunye nenkonzo engcono kuphela kwendlela yethu yokufikelela kubathengi bethu kunye nokufezekisa nathi. Samkela abathengi kulo lonke igama ukuba banxibelelane nathi kubudlelwane beshishini kwixa elizayo. Izisombululo zethu zezona zilungileyo. Nje ukuba ukhethwe, ugqibelele ngonaphakade!
Egqithileyo Inkukhu kunye nesilayidi sedada
Okulandelayo: Imichilo yedada eyomileyo
Idada uJerky Strip Strip
Idada elithambileyo uJerky
Inkukhu kunye nesilayidi sedada
Inkukhu irayisi idumbbell
Imichilo yedada eyomileyo